Waxaa Howlgal Balaaran oo ka socda Degmada Waaberi ee Gobalaka Banaadir – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa howlgal xoogan waxa ay ka wadaan qeybo badan oo kamid ah Degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir.
howlgalkan oo Goor dhow bilowday ayey Ciidamdu ku xireen qaar kamid ah wadooyinka gala Xaafadaha Degmada Waaberi.
si gaar ah howlgalku waxa uu kaga socdaa inta udhexeyso isgoysyada Dabka iyo Shaqaalaha ee Degmada waaberi,Ciidamada uma talaabin Dhinaca laamiga ka xigta Degmada Hodan balse waxa ay ku koobanyihiin oo kaliya Waaberi.
Gudaha xaafadaha uu ka socdo howlgalka waxaa ku jira Ciidamada Nabad Sugida Soomaaliya,Ciidanka AMISOM ayaa taagan oo kaliya wadooyinka ka dega Laamiga dheer ee Maka Al-Mukarama.
Goobjooge ayaa sheegay in Ciidanka AMISOM ay dadweynaha udiidayaan iney gudaha ugalaan Xaafaaha waxeyna ku amrayeen iney dib ulaabtaan.
inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa uu Howlgalkan salka ku hayo ayaa hadana Saraakiil ka tirsan Nabad Sugida Soomaaliya inoo sheegeen in Howlgalkan yahay Bartilmaameed Gooni ah.
waa mar kii labaad oo Ciidanka AMISOM iyo kuwa Dowlada howlgalkan lixaadka leh ka sameeyaan Xaafadaha Waabei gaar ahaan nawaaxiga Saldhiga iyo Xarunta Degmada Waaberi.
Habeenkii Khamiistii ina dhaaftay ayey eheyd markii Ciidamadan Howlgal kan lamid ah ay ka sameeyeen isla Goobaha hada la baarayo.
Si kastaba Ciidamada Nabad sugida Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa mudooyinkan xoojiyay howlgalada ay ka sameynayaan degmooyinka Gobolka Banaadir ,waxaad moodaa iney Hay’adaha amaanka Dowlada hayaan macluumo la xiriirta iney tuhmeen Ururka Al-Shabaab oo Ciidankooda soo galay Muqdisho.